APICMO Yedu Tsika yeMishonga yeMishonga ye CMO / CDMO Intermediates
Girasi Yedu Grid
Co-founder, hutungamiri hwehutungamiri hwekambani; PhD inogamuchirwa kubva kuFudan University mune zvekugadzirwa kwemakemikari. Makore anopfuura mapfumbamwe ane ruzivo rwehupenyu hwehutano hwemishonga yemishonga yemakemikari. Chiitiko chakapfumisa mukubatanidza michematorial chemistry, mishonga yemishonga uye tsika tsika pamwe nehuwandu hwekugadzira.
Vachigaro Vachigaro weMutungamiri
Co-founder, hutungamiri hwehutungamiri hwekambani; PhD inogamuchirwa kubva kuFudan University mune zvekugadzirwa kwemakemikari. Makore anopfuura mapfumbamwe ane ruzivo mu organic chemistry uye drug design design; inenge mapepa ekutsvakurudza e10 akabudiswa mumabhuku ekuremekedza, ane zvivako zvinopfuura mashanu zveChina.
Vakapedza kudzidza kubva kuDhipatimendi rezvakemikari, Stanford University, Stanford University, Dhipatimendi yemakemikari uye makemikari, kupfuura makore 15 ane ruzivo mubasa remakemikari ehuwandu hwehutano, yakashandira Pfizer Inc, iyo inotarisira kuiswa kwekutengeswa kwemusika wepasi rose uye yakagadzirisa zvakanakisisa.
Zvinopfuura makore 10 anoshanda chiitiko mumunda wemakemikari organic synthesis, yakashanda mu GSK, inotarisirwa kutengesa muNorth America, yakaguma migumisiro yakaisvonaka.
Chisungo Zvikamu Select Category CMO content (2) Zivo yezvechiremba (7)
2019 CNS Kurapa Drug Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Nguruve Ubongo (37758-47-7) 06 / 05 / 2019
Zvose Zvaunoda Kuziva NezvePyridines 08 / 30 / 2018
Yakawanda Inoshandiswa Heterocycles Munyika 08 / 28 / 2018
Zvose zvaunoda kuziva pamusoro pe spiro mazana 08 / 28 / 2018
2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Makemikari Abstracts Services) Registry Number 22536-61-4 08 / 18 / 2018